Features_XH_Iimbonakalo | PIVX
I-Zerocoin ephunyezwe yi-PIVX, ngumgaqo-nkqubo owenza oko iBitcoin ingakwazi. I-Zerocoin inikeza ubungasese obupheleleyo kubasebenzisi be-PIVX. Ukuphunyezwa kwe-PIVX yeprotocol yeZerocoin iguqula i-PIV engabonakaliyo kwi-zPIV (ebhalwe yiqela le-PIVX njengeZerocoin PIV okanye i-zPIV elifutshane). Xa umsebenzisi enqwenela ukuchitha (ezithunyelwa ukusuka ku A ukuya ku-b) zPIV, i-zPIV ibonakala kwi-wallet ye-receiver njenge-PIV rhoqo ngaphandle kwembali apho i-PIV ivela khona.
UkuTshintshana kweeNkqubela: Iintlawulo ze-SwiftTX ziqinisekisiwe kwaye zithengwa ngemizuzwana, ziqinisekiswe yintanethi yamasternodes, kungekho mfuneko yokulinda iziqinisekiso ezininzi ukwenzela ukuba uqiniseke ngokuqinisekileyo kwintengiso.
I-Base Base: I-PoS 3.0 Bitcoin Core 0.10.x
I-PIVX bubungqina bokuqala be-stake cryptocurrency esekelwe kwinguqulelo 0.10 okanye ngaphezulu kwe-Bitcoin codebase, kwaye isakhiwo sePos esetyenziswayo sichitha ixesha lokuhlawulwa, okuthetha ukuba ukuze ufumane uninzi lwe-staking yakho kufuneka ugcine i-wallet yakho evulekile kuzo zonke Amaxesha, kubangele iindawo ezinokuhlala zikhona, ukuqinisa umnatha. Abasebenzisi abasebenzisi abavula i-wallet yabo kanye okanye kabini kwinyanga imizuzu embalwa kwaye bafumana umvuzo ngokulinganayo nalabo abanesiphelo se-24/7 kunye nekhredithi yabo.
Jonga-Ukubonelela Imiphumo Yemivuzo
Vimba imivuzo efunyenwe ngu-staker kunye ne-masternode yokuphumelela ixhomekeke kwisamba semali esebanjelwe i-masternodes ngokumalunga nemali yezinto ezikhoyo ezikhoyo ekugxineni kwintanethi ivumela imivuzo eyahlukileyo ngokusekelwe kwiimfuno zenethiwekhi ukugcina iinkonzo zethungelwano (i-Masternode) kunye nekhuseleko Lwentambo (Staking Wallets) ngokusabalalisa. Xa kuncinci njengoko inani lamasternodes liphakamisa inxalenye yomvuzo webhloko abayifumanayo iyancipha, iyakwanda xa inani leemasternodes liyancipha.
Ezi zi-node ezikhuthazayo ezifumana imivuzo ngokusekelwe kubakho kunye nokukwazi kwabo ukunikezela ngeenkonzo zethungelwano ngendlela engabonakaliyo. Ukuqhubela i-masternode kudinga ukuvalela i-PIV ezi 10,000 yokubambisa ixesha elide xa ukhetha ukuqhuba i-masternode kwaye uvumela umnini ukuba avotele kwisiphakamiso sesabelomali kunye nophuhliso.
Ezinye izinto eziyingqayizivele
Abantu bavame ukubuza ukuba kutheni bafanele bakhethe i-PIVX ngaphezulu kwenye yemali ye-crypto, noluhlu olutshanje lwemiba eyenza i-PIVX ibonakale kwizihlwele.
I-PIVX yintengo engaziwa yintanga-mboleko.
I-PIVX isebenza kwiiNkcazo eziPhezulu zeNkcazo eziPhezulu njengezivumelwano zayo ezingagqibekanga.
I-PIVX i-Community Driven
I-PIVX isebenzisa ubungqina obuphuculweyo be-Blackcoin ye-Stake 3.0 protocol esikhundleni soBungqina Bomsebenzi. Ngoko kusebenza ngokugqithiseleyo ukugcina intanethi iphephile kunePoW.
I-PIVX inemali ephantsi kakhulu yokuthengiselana okuqhelekileyo yincinci ye penny ngenxa yokusebenza kwePoS. Oku kuthetha ukuba kulungelelanise imveliso yamanani entengo yezinto ezincinane ezazisetyenziswa ngeBotcoin.
I-PIVX yayingekho ICO. Iimali zeemali eziphambili ngaphambi kokuba uqalise ikhonkco zatshiswa esidlangalaleni.
I-PIVX isekelwe kwi-Bitcoin ye-0.10.x eyona nto ithetha ukuba ikhona ngokugqithiseleyo kunamanye amaninzi eemali ze-digital ze-PoS ezisebenzisa ngokuqhelekileyo ingqungquthela engundoqo ye-Bitcoin.
I-PIVX isebenzisa uhlelo olulinganisiweyo lwe-Seesaw Reward Balance System oluguqulela ngokutsha umvuzo walo kuma-masternodes kunye neenstaking staking. (Jonga iphepha elimhlophe.)
I-PIVX inomdla omkhulu kwaye ukhulayo kwiindawo ezininzi zokunxibelelana nabantu ezifana neBCT, Slack, Reddit, Twitter, Gitter, Facebook njl
I-PIVX yoluntu iphinda isebenzise Teamwork.com yokucwangciswa komsebenzi kunye nokuphathwa komsebenzi.
I-PIVX ineqela eliphuhlisa kakhulu, elifikelelekayo noluphendulayo.
I-PIVX ifumaneka ukurhweba ngeengxoxo ezininzi kuquka iBittrex kunye nezicwangciso zokudibanisa kwiintlobo ezinkulu.
I-PIVX ihamba ngexesha lokunciphisa umvuzo wokunyuka kwemali kwenyanga kunye nokufikelela kwinqanaba lokugqibela le-approx. 4.8% ngaphakathi koMeyi 2017.
I-PIVX inendawo yokugcina izikhokelo ezicwangcisiweyo ngakumbi kubandakanywa izikhokelo zevidiyo kunye nezixhobo.
I-PIVX ibeneepesenti eziphezulu eziphezulu ukuzuza ngokuthelekiswa nezinye iindleko zemigodi esebenzisa ama-masternodes afana ne-DASH ukususela ngokuqaliswa kwanoku ngoku.